गृहमन्त्री बादलको यस्तो भनाइले सत्तारुढ नेकपाभित्र हलचल, कसमाथि हुदैछ कारवाही — Sanchar Kendra
१शहरी क्षेत्रका विद्यालय एकमैना सम्म बन्द गर्न सिफारिस
२ओलीले बाेलायकाे सर्वदलीय बैठक सकियो ,के-के भयाे निर्णय ?
३प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता
४वरिष्ठ साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको निधन
५बालुवाटारमा माओवादी र नेपाल समूहबिनैको ‘सर्वदलीय’ बैठक सुरु
६ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजाने
७त्रिकोणात्मक सिरिज : नेपाल र नेदरल्याण्ड्स दर्शकसहित खेल्दै, यस्तो छ हेड टु हेड
१०आज ११ बजे बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्दै
१२कोहलपुरमा बस र टिपर ठोक्किँदा पाँच जनाको मृत्यु
गृहमन्त्री बादलको यस्तो भनाइले सत्तारुढ नेकपाभित्र हलचल, कसमाथि हुदैछ कारवाही
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाँकेको खजुरामा नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामाथि कु’टपि’ट गर्ने दोषीलाई कारवाही गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।साथै, यो घटनालाई लिएर कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई पिटेको भन्ने अर्थमा फेसबुकबाट प्रचारबाजी गरेर चरित्र ह’त्या नगर्न गृहमन्त्रीले विपक्षीलाई आग्रह गरेका छन् । बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नं. २ सीतापुरस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हलमा वीपी जयन्ती मनाउने क्रममा विहीबार कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु कुटिएका थिए ।
घटनामा बाँकेकी कांग्रेस सभापति किरण कोइरालाको हात भाँ’चिएको थियो भने विद्याप्रसाद खनाल लगायत केही कार्यकर्ता घाइते भएका कांग्रेसले जनाएको छ । यो घटनालाई लिएर कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेको छ । माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्नेदेखि गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मका कार्यक्रम कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेसले यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि घटनाबारे स्पष्टीकरण दिँदै गृहमन्त्री थापाले दोषीलाई कारवाही गरिने आश्वासन दिएका हुन । उनले सो घटनामा संलग्न केहीलाई पक्राउसमेत गरिसकिएको र कावाहीसमेत भइसकेको संसदीय समितिमा जानकारी दिए । गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यसबारेमा हाम्रो हिजो नै ध्यानाकर्षण भएको हो । विषय आइसकेको छ । यहाँहरुले जो दोषीमाथि कारबाही गर्ने माग गर्नुभयो, कारवाही पनि भइसकेको छ । तीनजना पक्राउ परिसकेका छन् र अरुलाई खोजी जारी छ ।’
कांग्रेस भन्छ– कम्युनिष्टले सभाहलभित्र पसेर कुटे
आफूहरुमाथि नेकपाका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको कांग्रेसको आरोप छ । वीपी जयन्तीको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आवद्ध अपराधिक मानसिकता भएका ५०/६० जनाको समूह सभा हलभित्र प्रवेश गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडले बताएका छन् । यति ठूलो घटना हुँदासम्म पनि सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन एवं सरकार मौन बस्नु अन्यन्त दुःखदायी भएको भन्दै कांग्रेस नेता खाँडले दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन् ।
कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले पार्टीको कार्यक्रम चलिरहेका बेला नेकपाका कार्यकर्ताले हलमा प्रवेश गरेर सत्ता र शक्तिको उन्मादमा गुण्डागर्दी शैलीमा सांघातिक आक्रमण गरेको बताइन् । यो घटनाबाट कम्युनिष्टको चरित्र उदांगिएको उनले बताइन् । यसैवीच, सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद डीला संग्रौलाले बाँके घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ध्यानाकर्षण गराइन् । त्यसअघि नै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे सरकार मौन बसेको आरोप लगाए ।
तर गृहमन्त्री बादलले भने खजुराको घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन् । यो घटनालाई लिएर कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई पिटेको भन्ने ढंगबाट फेसबुकमार्फत चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको गृहमन्त्री थापाको तर्क छ । गृहमन्त्री थापाले जुनखालको घटना भयो, त्यो दुःखद भएको बताए । मन्त्री थापाले शुक्रबार संसदीय समितिमा भने, ‘घटना भयो । झडप हुँदा छुटाउने क्रममा सभापतिज्यूको हात फ्याक्चर भएको भन्ने कुरा आएको छ । घटना दुःखदै हो । यतातिर हामीले प्रशसनतिरबाट गर्ने कारबाहीलाई अगाडि बढाइसकेका छौं । दोषीमाथि कारवाही हुन्छ ।’
तर, यो घटनालाई कम्युनिष्टले कांग्रेस पिटेको अर्थमा नबुझ्न गृहमन्त्री थापाले आग्रह गरे । गृहमन्त्री थापाले भने, ‘त्यो कुनै राजनीतिक नभएर, नेकपा र कांग्रेस भएर नगरेको हुनाले केही विषयहरु जुन फेसबुकमा आएको र चरित्र हत्या गर्न… त्यस्तै घटनालाई लिएर यो घटना भएको देखिन्छ ।’ बादलको यस्तो प्रतिक्रियाले सत्तारुढ दलभित्र हलचल ल्याइदिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको दोस्रो चरणको जागरण अभियानअन्र्तगत बाँकेको सीतापुरमा भएको घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउका छन् । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्लाका सभापतिले आज बिहान सिंहदरबारमा दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले घटनाका दोषीलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । गृहमन्त्री थापाले भने, ‘हुन नहुने घटना भएको छ, घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार गम्भीर छ ।’
गृहमन्त्री थापाले घटनामा दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कानूनी कारवाही हुने बताए । घटनामा दोषी देखिएका केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको र बाँकीलाई पनि चाँडो नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्ने उनको भनाई थियो । कांग्रेस काठमाडौँका सभापति सबुज बानियाँले कांग्रेसको जागरण अभियान सञ्चालनका क्रममा कार्यक्रम चलिरहेको बेलामा पार्टी जिल्ला सभापतिसहितलाई हातपात गर्नु निन्दनीय कार्य भएको बताए ।
कांग्रेस ललितपुरका सभापति मदन अमात्यले नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रम बिथोल्ने मनसायका साथ उक्त घटना घटाइएको भन्दै घटनाको दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने बताए । यति ठूलो घटना हुँदा पनि गृह प्रशासन संवेदनशील नभएको उनको आरोप थियो । कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले कांग्रेसले सञ्चालन गरेको जागरण अभियानबाट आत्तिएर सत्तापक्षको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उक्त घटना घटाइएको आरोप लगाए ।